Kheyre”Haddii aan lagu heshiinin doorashada, waxay qatar gelin kartaa dowladnimada Somaliya” – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ahna musharax Madaxweyne oo Jimcihii maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha doorashooyinka.
Xasan Cali Kheyre oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in uu horay u sheegay intii uu xilka haayay inay waajib tahay in Afartii sanaba dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo waafaqsan Dastuurka haatana uu markale ku celinayo.
Waxaa uu sheegay in haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho aan lagu heshiineyn doonin dowladnimada ka dhalata, sidaas daraadeedna loo baahan yahay in Cashar laga barto wixii la soo maray.
“Waxaan maanta dalka dib ugu soo laabtay in uu jiro walaac la xiriiro doorashada, waxaana ugu baaqayaa madaxda dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed inay muhiim tahay in lagu heshiiyo doorashooyinka, laakin haddii aan lagu heshiin ay qatar geli karto dowladnimada Soomaaliya‘‘ ayuu yiri Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in doorasho aan lagu heshiin ay ka dhalan karaan dhibaatooyin kala duwan, isaga oo tusaalo u soo qaatay dagaalka ka socda Itoobiya oo uu sheegay inuu ka dhashay doorasho dib loo dhigay.
Tags: Doorashada dalka, dowladnimo, Kheyre oo dib u soo laabtay, qalqal gelin